သက်ဝေ: ကလေးများ၏ စိတ်ကို လေ့လာခြင်း
Posted by သက်ဝေ at 1:22 PM
sin dan lar November 6, 2008 at 2:10 PM
ကိုယ့်အလှည့်မှာ ဒီလိုမိဘမျိုးမဖြစ်အောင် ဆင်ခြင်မယ်။ ဆက်ရန်ကို စောင့်ဖတ်နေပါတယ်..
sonata-cantata November 6, 2008 at 2:38 PM
- November 6, 2008 at 2:56 PM
ဒီနေရာမှာ မိဘတွေရဲ့ Education နဲ့ Knowledge နဲ့လည်း ဆိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ သိပ်တော့နားမလည်ပေမယ့် ၀င်ပွားတာပါ။
အနာဂတ်လူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ လက်ဦးဆရာ ဖြစ်တဲ့ မိဘရဲ့ ပဲထိန်းမှု၊ လမ်းညွှန်မှု၊ ကိုင်တွယ် မှုပေါ် အများကြီး မှီတည်ပါတယ်ဆိုတာ ....
maung November 7, 2008 at 12:16 AM
myatnoe November 7, 2008 at 5:45 PM
မိဘတွေဆိုတာ ကလေးဘဝကို ဖြတ်ပီးမှ မိဘ ဘဝရောက်တာပါဗျို့..။ ကိုယ့်အလှည့်မှာခံစားရတဲ့ အရာလေးတွေကို နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ပီး ကိုယ့်ကလေးတွေကို ကိုယ့်ငယ်ဘဝထက် သာအောင်ထားနိုင်ကြပါစေ ။ ဆုံးမနိုင်ကြပါစေလို့ မြတ်နိုးလဲ ထောက်ခံပါရစေဗျို့..။
အမရေ.. မြတ်နိုးလဲ အဲလိုမျိုးစာအုပ် ဖတ်ဖူးတယ် ကလေးဆရာဝန်တယောက်ပဲ စာရေးသူနာမည်မှတ်မိတော့ဘူး
ကလေးများကိုပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း ဆိုတဲ့ စာအုပ်ပါအမ
အဟီး မြတ်နိုး ငယ်ငယ်က လျှောက်ဖတ်တာ စာဆို တွေ့သမျှ အကုန်ဖတ်တယ်..
လူသစ် November 8, 2008 at 12:18 PM
မြတ်နိုးညွှန်းလို့ လာဖတ်ပါတယ်ဗျား။ ဆက်ရေးပါဦး။ မသိတာလေးတွေလဲ သိလာရတာပေါ့။ ခုထိတော့ ကလေးတွေကိုဆူပူဖို့နဲ့ ရိုက်ဖို့ကိစ္စတွေကတော့ ကလူသစ်ရှောင်ရန်ထဲမှာ ပါပါတယ်။ နားလည်မှုရဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
ဇနိ November 8, 2008 at 6:31 PM
အမရေ ကလေးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်ပုံနည်းတွေကို စိတ်ဝင်စားပါတယ် အမရေ...
အမ Pan Nwe ဆီမှာ လည်း ရေးထားတာရှိတယ်..
PAUK November 9, 2008 at 9:47 PM
မသက်ဝေက ကျနော် မကေအိုအမ်ဖက်မှာတွေ့တဲ့
ကျနော်..အစကတော့ သမီးရဲ့ အမှတ်များခြင်း
အပြုအမူ။ အနေအထိုင် (ဥပမာ ပေါင်စေ့ထိုင်ခြင်း)
အပြောအဆို တွေကိုပဲ တောင်းဆိုပါတယ်။
ကိုယ်က မတောင်းဆိုတော့..သူက ပိုပြီးပေါ့လျှော့ပါတယ်။။ အခုချိန်ထိတော့ ကလေးကိုအမှတ်နည်းလို့ မရိုက်မိသေးပါဘူး။။
ကလေးတွေကို ရိုက်တိုင်း မလိမ္မာပါဘူး။
အရင်က နည်းနည်းဆို ရိုက်တတ်ပါတယ်..အခုတော့
တန်ခူး November 11, 2008 at 3:42 PM
သက်ဝေရေ… တို့ RIT ပထမနှစ် တလျှောက်လုံး စိတ်ဆင်းရဲခဲ့ရတာကို သတိသွားရတယ်…
ဆရာဝန်ဖြစ်စေချင်တဲ့ အဖေရည်မှန်းချက်ကို တို့ မဖြည့်ပေးနိုင်ခဲ့လို့အဖေက နေ့ တိုင်းလိုလို ဆူတယ်… အဖေက သားသမီးကို မိဘထက် ထူးချွန်ရမယ်… အဲဒါမှ generation မြင့်မြင့်လာမယ်လို့စိတ်အားပြင်းထန်ခဲ့တာ….
အမေကတော့ ရောက်ရာနေရာ ထူးချွန်အောင်လုပ်လို့ဆုံးမတယ်…
ပထမနှစ်ကလေလိုက်တဲ့စိတ်… ဒုတိယနှစ်ရောက်တော့ Section Bတောင် ရောက်သွားတယ်…
အမေက အားပေးတယ်… စိတ်မလေပဲ ရောက်ရာနေရာမှာ ထူးချွန်အောင် ကြိုးစားရင် အောင်မြင်တဲ့သူ ဖြစ်မှာပဲတဲ့…
ဒုတိယနှစ်ကျတော့ ပြန်ကြိုးစားခဲ့တော့ အမှတ်တွေ ပြန်ကောင်းပြီး အဖေလဲ မဆူတော့ဘူး…
တို့ စိတ်ထဲမှာ ဆရာဝန်ကို အဖေ့အတွက်သာ လိုချင်ခဲ့တာ… သိပ်မက်မက်မောမော မရှိလှဘူး… ၀ါသနာကလဲမပါဘူး….
ကိုယ့်အလှည့်ကျတော့ သားလေးကို သူဝါသနာပါရာပဲ ထူးချွန်အောင် မြေတောင်မြှောက်ပေးမယ်လို့စိတ်ကူးထားတယ်… ကိုယ့်ဖြစ်ချင်တာကို သူ့ ကို လုပ်ခိုင်းတာ သူ့ အပေါ်မတရားသလိုပဲလေ….
Moe Cho Thinn November 12, 2008 at 2:33 AM
ချိုသင်း မိဘကတော့ ကလေးတွေအပေါ်မှာ သိပ်မလွှမ်းမိုးဘူး။ ဘာမှ force နဲ့ မပြော၊ မလုပ်ခိုင်းဘူး။ ဒါကြောင့်များ ချိုသင်းလဲ တတ်နိုင်သမျှ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ညှာခဲ့လေသလား၊ အချောင်ခိုခဲ့လေသလား တွေးမိတယ်။
ဒါပေမဲ့ မတန်ခူး comment လေးကို ဖတ်ပြီး စိတ်မကောင်းဘူး။ ချိုသင်းရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေမှာလဲ အဲဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေ အများကြီးရှိကြတာ တွေ့ဖူးပါတယ်။
nu-san November 13, 2008 at 10:41 PM
မသက်ဝေ.. ကလေးတွေအကြောင်း ဖတ်ရတာ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသလို ကိုယ်တိုင်လည်း တချိန်မဟုတ် တချိန် ကြုံတွေ့ရမှာမို့ သေချာဖတ်နေတယ် အမ (မုန့်ဆီကြော်တော့ မရှိသေးဘူး... အဟီး.. )
ကျနော်တို့ ငယ်ငယ်ကတည်းက အဖေက လုံးဝ မရိုက်ဘူး.. ဘာလုပ်ရမယ်လို့လည်း မတောင်းဆိုဘူး.. အမေကတော့ ပြောစကား နားမထောင်ရင် သူမကြိုက်တာ လုပ်ရင် ရိုက်ပြီး ဆုံးမတယ်... ဒါပေမယ့် အဖေရော အမေရော ပြောတာက စာကြိုးစားဖို့ပဲ ပြောတယ်.. အဆင့် ဘယ်လောက်ရမှ ရမယ်တို့ ဘာတို့မပြောဘူး.. မကျရင် ရပြီ။ အဟီး ... :D
သက်ဝေ November 24, 2008 at 1:20 PM
Sin.. အားပေးတာ ကျေးဇူးပါ။ ညီမကို ဘယ်လိုခေါ်ရမလဲ ဆိုတာလေး မြန်မာလို ပြောပြပေးစေချင်ပါတယ်။
မသီတာ... အားပေးတာ ကျေးဇူးပါ။ ဆက်ရေးထားပါပြီနော်...။
ကိုဝင်းဇော်... ၀င်ပွားတာလို့မယူဆပါဘူး၊ ကိုယ်နားလည်သလို ပြောကြည့်ကြတာပေါ့...။ အမြဲလာဖတ်ပြီး စာမူခပေးခဲ့တဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ...။
(ကို/မ) မောင်... ကျေးဇူး။
မြတ်နိုးရေ... စာလာဖတ်၊ စာမူခပေး၊ ညွှန်းပေးတာ ကျေးဇူးနော်...။ အကြာကြီး ခွဲမထားနဲ့ လေ.. အချိန်ရတာနဲ့မြန်မြန်ပြန်လာခဲ့နော်...။ မျှော်နေမယ်...။
သမီးရှင် ကိုလူသစ်... ကြိုဆိုပါ၏။ ဆက်ရေးထားပြီနော်... ဖတ်ပြီး ဆွေးနွေးပါအုံးလေ...။
နိနိ... ကြိုတင်လေ့လာနေသည်ပေါ့... ဟုတ်စ...။ ညီမ ညွှန်းထားတာလဲ ဖတ်ပြီးပါပြီ။ ကျေးဇူးနော်...။
ပေါက်ရေ... ဟုတ်ပါတယ်။ ကလေးဆိုတာ ကိုယ်ရိုက်ရင်လဲ ခံကြရမှာပဲလေ...။ ရိုက်ပြီးမှ နောင်တရကြမယ့်အစား မရိုက်ခင်မှာ ဒေါသကို ရေဖြန်းကြတာပေါ့နော်...။
တန်ခူးရေ... တန်ခူးရဲ့Comment လေး ဖတ်ရတာ စိတ်မကောင်းဘူး။ မိဘဆိုတာတော့ ကိုယ့်သားသမီးကို အကောင်းဆုံးတွေ ဖြစ်စေချင်ကြတာပေါ့နော်...။ တန်ခူးရဲ့ဖေဖေကို တချိန်ကြရင်... (ဥပမာ.. တန်ခူး သားလေး အတန်းကျောင်းတက်ပြီး အမှတ်တွေ ထွက်လာတဲ့ အချိန်မျိုး) တန်ခူး ကိုယ်တိုင် နားလည်လာပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ့်တွေ အလှည့်ကျရင်သာ သူတို့ ဆန္ဒလေးတွေ၊ သူတို့ဝါသနာလေးတွေကို လိုက်လျောနိုင်အောင်၊ မြေတောင်မြှောက် ပေးနိုင်အောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားကြည့် ကြတာပေါ့နော်...။
ချိုသင်း... တို့ တွေ့ ဖူးတဲ့ တချို့ မိဘတွေက ကိုယ့်သားသမီးကို ယုံကြည်မှု ရှိကြတယ် လွတ်လပ်ခွင့်တွေပေးထားတယ်.. ဒါပေမယ့် အခွင့်အရေးကို အလွဲသုံးစားတော့ မလုပ်ရဖူးလို့ပြောထားကြတယ်။ တို့ မိဘတွေကတော့ အဲဒီလောက် မလျှော့ဖူး၊ ဒါပေမယ့် တအားတော့ တဖက်စွန်း ရောက်အောင် မတင်းကြပ်လှပါဘူး...။ အလယ်အလပ်ပေါ့...။
နုရေ... ကြိုလေ့လာထားတော့ ကောင်းတာပေါ့...။ မုန့် ဆီကြော်လေး ရှိလာအောင် ဆုတောင်းပေးတယ်နော်...။ ဟီဟိ...